विजय मोहन क्वात्रा नेपालका लागि नयाँ भारतीय राजदूत
काठमाडौं । नेपालका लागि नयाँ भारतीय राजदूतमा विजय मोहन क्वात्रा नियुक्त भएका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएअनुसार भारतको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उनलाई नेपालका लागि नयाँ राजदूतमा नियुक्त गर्ने निर्...
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेका लागि मार्ग प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन । मंगलबार प्रेस संगठन लमजुङले आयोज...
काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित नेपालको पहिलो संसद भवन भत्काएर स्टेट गेस्ट हाउस बनाउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको नेपालकै ...
काठमाडौँ । चन्द्रागिरि नगरपालिका-२ नागढुङ्गाबाट स्रोत नखुलेको नगद ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ सहित दुई जनालाई सोमबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा पर्सा हिपरमाई गाउँपालिका-८ घर भएका २१ व...
सार्वजनिक बसमा सवार महिला यात्रुलाई अभद्र व्यवहार गर्ने चालक पक्राउ
ललितपुर । सार्वजनिक बसमा सवार महिला यात्रुलाई अभद्र व्यवहार गरेको अभियोगमा एक सवारी चालक पक्राउ परेका छन । उदयपुर कटारी घर भएका बा‍.२ ख ९३२४ नम्बरको बस चालक भक्तपुर सानोठिमी बस्ने २५ वर्षीय मिलन दाह...
काठमाडौं । सार्वजनिक बसमा हस्तमैथुन गर्दै महिलाको कपालमा विर्य स्खलन गर्ने युवक एक वर्षपछि पक्राउ परेका छन । महानगरिय प्रहरी परिसरले सार्वजनिक बसमा यात्रा गरिरहेकी युवतीलाई लक्षित गरी हस्तमैथुन गरेको...
काठमाडौं । काठमाडौंका दुई एनसेल टावरमा अज्ञात समूहद्वारा आगजनी गरिएकाे छ । देशका दुरदराजमा अज्ञातसमूहद्वारा आगजनी भन्ने खबर आइरहँदा पछिल्लो पटक काठमाडौंका दुई एनसेल टावरमा आगजनी भएको हो । सोमबार रात...
झापाबाट दुई नक्कली प्रहरी पक्राउ
झापा । बाह्रदर्शी गाउँपालिका -३ राजगढ बजारमा स्थानीय व्यापारीसँग प्रहरी हौँ भनी नगद असुली गरिरहेको अवस्थामा दुई जना नक्कली प्रहरी पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरूमा गौरीगंञ्ज गाउँपालिका-१ बस्ने २८ ...
काठमाडौं । नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा पश्चिमी निम्न चापीय प्रणालीको प्रभाव परेको छ । उक्त प्रणालीको कारण अहिले पश्चिमी क्षेत्रमा बदली भई सुदुर पश्चिमका उच्च पहाडी भूभागका केही स्थानमा वर्षा र हिमपात भइ...
काठमाडौं । आगामी १४ फागनमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू) निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने निर्णय गर्दैै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट अनेरास्ववियू केन्द्रीय कमिटीको दुई दिने बैठक...
काठमाडौं । कार दुर्घटनामा परेर गायक निशान भट्टराईको मृत्यु भएको छ । गएराति काठमाडौंको दरबारमार्गमा रहेको एक रेष्टुरेन्टबाट फर्किने क्रममा आफैंले चलाएको कार तीनकुनेमा दुर्घटनामा परेको थियो । गम्भीर अव...
काठमाडौं । भाटभटेनी सुपरमार्केटसहित पाँच कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल बनाएर अर्बौंको कर छली गरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। १० वर्षअघि यो कर छलीको अनुसन्धान भएको थियो। राजस्व न्यायाधीकरणबाट कर छलीमा...
सुरक्षा निकायमा सुरक्षाकर्मीको संख्या अपुग भइरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले भने व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि निजी निवासमा सरकारी कार्यविधिले तोकेभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी राख्दै आएका छन् । पूर्वप्रधानमन्...
कक्षाकोठामा ताला, विद्यार्थी छिमेकीको आँगनमा
सिराहा नगरपालिका–९ गुलरियास्थित आधारभूत विद्यालयमा पाँच शिक्षकको दरबन्दी छ । तर, ती शिक्षकले पढाउने विद्यार्थी भने चारजना मात्रै छन् । सदरमुकामदेखि तीन किलोमिटर दूरीमा रहेको यो विद्यालयमा ४५ विद्यार्...
एकै क्षणको सन्कीपनबाट शुरू हुने यौन हिंसाको लागत विश्वले कति भोग्दै छ ? अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन्– ‘यौन हिंसाको आर्थिक भार धेरै मुलुकको वार्षिक बजेटभन्दा अधिक हुन्छ। यसको मानसिक र सामाजिक लागतको त कुनै...
मोबाइल कलमा अब शुल्क घट्ने, अन्तरआबद्धता शुल्क १० पैसा मात्र
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कल गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउनुपर्ने गरी निर्देशिका जारी गरेपछि चैतबाट शुल्क घट्ने भएको छ । गत भदौमा ल्याइएको निर्देशिकालाई हालै संशोधन गर्दै प्...
मुसर्रफको मृत्युदण्ड फैसला बदर
पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति परवेज मुसर्रफलाई सुनाइएको मृत्युदण्डको फैसला बदर भएको छ। लाहोर उच्च अदालतले मुसर्रफविरुद्धको सजाय उल्टाउँदै यसअघिको फैसला प्रक्रिया असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो। सो अदाल...
अख्तियारको प्रश्न– मन्त्रिपरिषद्का निर्णय छानबिन गर्न किन नपाउने ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय किन छानबिन गर्न नपाउने भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेको छ । नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार मौलाएपछि आयोगले मन्त्रिपरिषद्का कस्ता निर्णय नीतिगत र...
विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ठगि गर्ने स्वामी पक्राउ
काठमाडौं । विदेश पठाइदिन्छु भन्दै आफ्नै शिष्यलाई ठगी गरेको आरोपमा शिवानन्द स्वामी भनिने दिपक भण्डारी पक्राउ परेका छन् । आइतबार महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा टेकुको टोलीले भण्डारीलाई पक्राउ गरेको हो...
काठमाडौँ । देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सार्वजनिक जग्गालाई निश्चित व्यक्तिहरूले अतिक्रमण गर्दै वर्षाै देखि लाभ लिइरहेका छन् । सार्वजनिक जग्गा कहाँ कति अतिक्रमण भएको छ भन्नेबारे राज्य बेखबर नभए पनि बिच...